Iibso Culayska RF Quwadda Sare Tayada Sare leh | FMUSER Radio Turnkey Solution
Inta lagu jiro habka tijaabada nidaamka RF, 200kw culaab culaab dummy ah (sidoo kale loo yaqaan 200kw RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska rack 200kw sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha
200000 watts rack rack waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awooda RF ee DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
dayactirka wariyaha FM-ta
Rack 100KW RF Dummy Load RF Xamuulka 100KW RF Joojinta 100000 Watt Attenuator iib ah
Inta lagu jiro habka tijaabada nidaamka RF, 100kw culaab culaab dummy ah (sidoo kale loo yaqaan 100kw RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska rack 100kw sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha
100000 watts rack rack waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awooda RF ee DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Rack 75KW RF Dummy Load RF Xamuulka 50KW RF Joojinta 75000 Watt Attenuator iib ah
Inta lagu jiro nidaamka tijaabada nidaamka RF, 75KW culeyska culeyska culeyska (sidoo kale loo yaqaan culeyska 75KW RF) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo adeegsadaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska 75KW ee rack dummy wuxuu badanaa ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka saara tamarta gudbiyaha
75000 watts rack rack waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awooda RF ee DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
50KW RF Dummy Load RF 50KW RF Joojinta 50000 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 50KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 50KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 50KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 50000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Rack 50KW RF Dummy Load RF Xamuulka 50KW RF Joojinta 50000 Watt Attenuator iib ah
Inta lagu jiro nidaamka tijaabada nidaamka RF, 50KW culeyska culeyska culeyska (sidoo kale loo yaqaan culeyska 50KW RF) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo adeegsadaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska 50KW ee rack dummy wuxuu badanaa ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka saara tamarta gudbiyaha
50000 watts rack rack waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awooda RF ee DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Habka tijaabinta nidaamka RF, 20KW rack culaab dummy (sidoo kale loo yaqaan 20KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo adeegsadaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Rakidhka 20KW ee cudbigu inta badan waxa uu ka kooban yahay iska caabin ku xidhan hiitarka kaas oo ka saaraya awooda gudbiyaha
Rackloader 20000 watts dummy load sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awooda RF ee DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
15KW RF Dummy Load RF 15KW RF Joojinta 10000 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 15KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 15KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 15KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 15000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
10KW RF Dummy Load RF 10KW RF Joojinta 10000 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 10KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 10KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 10KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 10000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 5KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 5KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 5KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 5000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 4KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 4KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 4KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 4000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
3KW RF Dummy Load RF 3KW RF Joojinta 1000 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 3KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 3KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culeyska 3 KW sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka saara awoodda gudbiyaha
Culayska dummy 3000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 2.5KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 2.5KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culeyska 2.5 KW sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka saara awoodda gudbiyaha
Culayska dummy 2500 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
2KW RF Dummy Load RF 2KW RF Joojinta 2000 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 2KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 2KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 1KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 2000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
1.5KW RF Dummy Load RF 1.5KW RF Joojinta 1500 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 1.5KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 1.5KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culeyska 1.5 KW sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka saara awoodda gudbiyaha
Culayska dummy 1500 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
1.2KW RF Dummy Load RF 1.2KW RF Joojinta 1200 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 1.2KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 1.2KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culeyska 1.2 KW sida caadiga ah wuxuu ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiator kaas oo ka saara awoodda gudbiyaha
Culayska dummy 1200 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay:
1KW RF Dummy Load RF 1KW RF Joojinta 1000 Watt Attenuator iib ah
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska 1KW dummy (sidoo kale loo yaqaan 1KW RF load) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay ee 1KW wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran radiatoor kaas oo ka baabi'iya awoodda gudbiyaha.
Culayska dummy 1000 watts ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo awoodda RF ka DC ilaa 1000MHz. Waxaa lagu gartaa 50 Ω impedance, iyo VSWR kama badna 1.20:1. Sidaa darteed, sababtoo ah isku-dhafka milicsiga hooseeya, waxay aad waxtar u leedahay: